Shir ku saabsan Amniga Shirka biri iyo Cida sugaysa oo ka soconaya Afisyooni.
Waxaa socda shirar si gaar ah looga hadlayo amaanka goobta shirka uu ka dhacaayo Maalinta berita ah kaasi oo u dhaxeeya Saraakiil ka socota Madaxtooyada Soomaaliya iyo Amisom kaasi oo ka dhacay Teendhada Afisyooni.
Warar hordhac ah oo la helaayo, ayaa sheegaya in Madaxtooyada ay aqbashay in amaanka Teendhada ay ku wareejiso Amisom lagana saaro ciidamada koofiya casta oo ku sugnaa tan iyo markii uu furmay shirkii uu u dhaxeeyay Dowladda iyo Seddex Dowlad Goboleed kaasi oo ka baaqsadeen Maamulada Puntlaand iyo Jubbaland.
Sharuudaha ay qabeen Maamulada Puntlaan iyo Jubbaland, Waxaa gundhig u ahaa Amaanka goobta iyo Ajandaha shirka, Waxaana shirkan hordhac ah looga hadli doonaa labadaas qodob.
« Maraykanka oo Cunaqabateen saaran Soomaaliya sii kordhisay.
Madaxweynaha Galmudug oo Tegay Hotelka Jasiira. »